Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Indonesia » I-Indonesia izohambisa inhlokodolobha edolobheni elisha e-Borneo jungle
Isithombe esenziwe ngekhompuyutha esikhishwe nguNyoman Nuarta esibonisa idizayini yesigodlo sikamongameli wesikhathi esizayo wase-Indonesia enhlokodolobha yaso entsha e-East Kalimantan
I-agglomeration yaseJakarta, okuyikhaya labantu abangaphezu kwezigidi ezingu-30, sekunesikhathi eside ikhungethwe yizinkinga ezihlukahlukene zengqalasizinda kanye nokuminyana. Izikhukhula ezivamile kanye nokwesaba ukushintsha kwesimo sezulu kuphinde kwaholela ochwepheshe besimo sezulu ukuthi baxwayise ngokuthi idolobha elikhulu lingacwila ngaphansi kwamanzi ngo-2050.
I-Indonesia ibonakala izothola inhloko-dolobha entsha maduze. Abenzi bomthetho base-Indonesia namuhla bavotele ukweseka umthetho ogunyaza ukufuduka okuzobona inhloko-dolobha yezwe isuka endaweni engamakhilomitha angu-2,000 ukusuka edolobheni lase-Indonesia. Jakarta esiqhingini saseJava.
Lolu hlelo lwamenyezelwa okokuqala nguMongameli Joko Widodo ngo-Ephreli 2019.
Umthetho omusha ophasisiwe IndonesiaIphalamende ligunyaza ukuthuthwa kwenhloko-dolobha yesizwe Jakarta ukuya edolobheni elisha elizokwakhiwa kusukela ekuqaleni kwesinye seziqhingi ezinkulu zase-Indonesia.
Idolobha elisha elibizwa ngokuthi 'iNusantara', lizokwakhiwa endaweni egcwele ihlathi esifundazweni sase-East Kalimantan esiqhingini sase-Borneo, i-Indonesia eyabelana ngayo ne-Malaysia kanye ne-Brunei.
Izinkinga ezibhekene nenhloko-dolobha yamanje zikhonjwe njengesizathu sokuhamba kungazelelwe. Jakarta's agglomeration, okuyikhaya labantu abangaphezu kwezigidi ezingu-30, sekuyisikhathi eside ihlushwa izinkinga ezihlukahlukene zengqalasizinda kanye nokuminyana. Izikhukhula ezivamile kanye nokwesaba ukushintsha kwesimo sezulu kuphinde kwaholela ochwepheshe besimo sezulu ukuba baxwayise ngokuthi idolobha elikhulu lingacwila ngaphansi kwamanzi ngo-2050.
Manje, Indonesia ngokusobala izimisele ukwakha 'utopia' evumelana nemvelo endaweni enamahlathi engamahektha angu-56,180 e-Borneo. Isamba esingamahektha ayi-256,142 abekelwe lo msebenzi, nomhlaba omningi uhloselwe ukunwetshwa kwedolobha esikhathini esizayo.
"Lesi [nhloko-dolobha] ngeke sibe namahhovisi kahulumeni kuphela, sifuna ukwakha idolobhakazi elisha elihlakaniphile elingase libe isizinda sethalente lomhlaba wonke kanye nesikhungo sokusungula izinto ezintsha," kusho u-Widodo enkulumweni yakhe enyuvesi yendawo ngoMsombuluko.
Umongameli uphinde wathi izakhamizi zenhloko-dolobha entsha zizokwazi “ukuhamba ngamabhayisikili futhi zihambe yonke indawo ngoba akukho kukhishwa kwesisi.”
Le phrojekthi, nokho, isivele ithole ukugxekwa kwezishoshovu zezemvelo, eziphikisa ukuthi ukuqhubeka kwedolobha laseBorneo kuzobeka engcupheni imvelo yamahlathi emvula asevele ehlaselwe izimayini namafutha esundu.
Izindleko zale phrojekthi bezingakadalulwa ngokusemthethweni kodwa eminye imibiko yangaphambilini yabezindaba iphakamise ukuthi zingafinyelela ku-$33 billion.
Ukusulwa Kocwaningo Olusha Lokwelashwa kwe-ALS